Vaovao - Fampiharana ny PVC
Ny PVC no thermoplastic tanjona voalohany indrindra ary manana fampiharana marobe. Izy io no karazany faharoa amin'ny vokatra plastika faharoa izay faharoa amin'ny polyethylene ambany.
Ny vokatra dia azo zaraina ho vokatra mafy sy vokatra malefaka:
Ny fampiharana lehibe indrindra ny vokatra mafy dia ny fantsona sy ny fittings, ary ny fampiasana lehibe hafa dia ny valin'ny rindrina, fizarazarana, varavarana sy varavarankely, akora fonosana sns.
Ny vokatra malefaka dia ampiasaina indrindra amin'ny sarimihetsika, ravina, tariby ary tariby, fitaovana amin'ny gorodona, hoditra sentetika, sns.
Inona no ampiasaina amin'ny PVC?
Ny fahasamihafana amin'ny fampiharana PVC dia mihaika ny saina. Amin'ny fiainana andavanandro dia manodidina antsika rehetra izy ireo: mombamomba ny fananganana, fitaovam-pitsaboana, fonosana amin'ny tafo, carte de crédit, kilalao ho an'ny ankizy, ary fantson-drano ho an'ny rano sy gazy. Vitsy ny fitaovana hafa izay mahavita zavatra na mahavita manatanteraka izany famaritana izany. Amin'izany fomba izany dia mampiroborobo ny famoronana sy ny fanavaozana ny PVC, manome fahafaha-manao vaovao misy isan'andro.
Fa maninona no mampiasa PVC?
Tsotra satria ny vokatra PVC dia mahatonga ny fiainana ho azo antoka kokoa, mitondra fampiononana sy fifaliana ary manampy amin'ny fitehirizana ny harena voajanahary sy hiadiana amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ary, noho ny tahan'ny fahombiazan'ny vidim-bidy tena tsara, ny PVC dia mamela ny olona amin'ny ambaratonga fidiram-bola hiditra amin'ny vokatra vokariny.
Ahoana no fandraisan'ny PVC anjara amin'ny tontolo azo antoka kokoa?
Betsaka ny antony mampifandray ny PVC sy ny fiarovana. Noho ny fananana ara-teknika tsy manam-paharoa, ny PVC no fitaovana fampiasa indrindra amin'ny fitaovam-pitsaboana mamonjy aina sy azo ampiasaina. Ohatra, ny fantsom-panafody PVC dia tsy mikitroka na vaky, ary mora mandry. Noho ny fanoherana ny afo nataon'i PVC, ny tariby sy ny tariby sarona amin'ny PVC dia misoroka lozam-pifamoivoizana mety hahafaty. Ankoatr'izay, ny PVC dia fitaovana matanjaka. Ampiasaina amin'ny singa fiara, ny PVC dia manampy amin'ny fampihenana ny lozam-pifamoivoizana raha sendra lozam-pifamoivoizana.